Madaxweyne Xaaf iyo Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo shir ku yeeshay Cadaado – Kalfadhi
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle “Xaaf”, ayaa xalay kulan Saacado badan socday waxa uu la qaatay Xildhibaano katirsan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo shalay gaaray magaalada Cadaado ee gobalka Galgaduud.
Wafdiga Xildhibaanada ah ee kulamada la qaatay Madaxweynaha Galmudug Xaaf, ayaa waxaa hogaaminayay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Abshir Bukhaari, waxaana kamid ah Wasiirkii hore ee Arimaha Gudaha Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa iyo Xildhibaan Saabir.
Madaxweyne Xaaf iyo Wafdiga Xildhibaanada ah ayaa kawada hadlay xaaladda jahwareersan ee Galmudug iyo muranka xooggan ee ka taagan arimaha doorashooyinka iyo daganaansho la’aanta Galmudug.
Sidoo kale Xildhibaanada oo Madaxweyne Xaaf uga sii hormaray Cadaado ayaa magaalada ku soo dhoweynayay Madaxweynaha Galmudug oo degaanka ka maqnaa sanadihii ugu dambeeyay kadib markii uu dagay Dhuusamareeb.
Wali ma jirto qodobo la isla meel dhigay oo ay dhinacyada kawada hadleen islamrkaana lala-wadaagay Shacabka Soomaaliyeed. Axmed Ducaale Geelle, Madaxweynaha Galmudug ayaa khilaaf uga soo baxay magaalada Dhuusamareeb habeen hore waxa uuna markii uu yimid Godinlabe uu ku dhawaaqay in uu aqbaly qabashada doorashada Galmudug oo ay garwadeynka ka tahay Dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale waxa uu buriyay heshiiskii uu la galay Maamulkii Ahlsunna Waljameeca isagoo sidoo kale sheegay in doorashada lagu qaban doono magaalada Cadaado oo xarun KMG ah u ahyed Galmudug ka hor inta aysan u guurin magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Gobalka Galguud.
Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Aqalka Sare iyo Xildhibaanada kale oo dhamaantood degaan doorashadooda tahay Gobalka Galgaduud ayaa rajo ka qaba in ay damiyaan culeeska siyaasadeed ee ka jira Galmudug taas oo ka dhalatay muranka Dowladda Soomaaliya iyo hogaanka maamulkaasi.
Sheekh Shaakir "Wixii maanta ka dambeeyo go'aanka dowladda dhexe ayaa ka shaqeyn doono Galmudug"